Nyamavhuvhu apfuura, ndakaita chinyorwa nezve Google Bhizinesi Yangu. Iyi vhiki yevhiki, ini ndakasimudza mwanasikana wangu kubva paakagadzwa bvudzi. Iyo salon yaive yakanaka uye vanhu vaishanda ipapo vaifadza. Muridzi akandibvunza zvandairarama uye ndikamuudza kuti ndakabatsira makambani nekutengesa kwavo pamhepo.
Isu takanga takamira pakombuta uye akagovana neni kuti poindi yake yekutengesa mupi yaiitawo webhusaiti yake. Ndakamukumbira kutsvaga paGoogle "Bvudzi Stylist, Greenwood, IN“. Kumusoro kwakakwira mepu yakanaka neese emakwikwi ake… asi hapana yekupinda yake salon. Ndakafamba naye kutsikisa bhizinesi rake paGoogle Bhizinesi Rangu uye zvakatora maminetsi ese gumi.
Kana iwe uri mubhizinesi rekutengesa mawebhusaiti emabhizinesi ematunhu kana kuita yemunharaunda yekutsvaga injini, ungasiya sei izvi pazano rako? Iyo yemahara, iri pamusoro pekutsvaga peji peji, uye iri nyore kushandisa! Google yakatowedzera mamiriro emunharaunda kune iyo peji.
Kunyangwe usiri bhizinesi remudunhu, ini ndichiri kukuyambira kuti ushandise Google Bhizinesi Rangu. Mabhizinesi anofarira kushandisa zviwanikwa zvemuno nekuti zviri nyore kutaura navo, kushanya, uye kuwana rutsigiro kubva. Tenga zvemuno, tenga zvemuno, tsvaga zvemuno… uye nyora bhizinesi rako kuti uwane. Bing zvakare ine Yemunharaunda Yezvinzvimbo Center
Tags: mamapu ebinggoogle bhizinesi renzvimbogoogle bhizinesi rangulocal searchyemunharaunda yekutsvaga injini optimizationyemuno seo
Chii chinonzi Content Authority?
Mar 25, 2010 pa 10: 52 AM
Ini ndinofunga kuti iyo yakawanda nzira yaunounza yako ruzivo uye nekuvaka huvepo hwebhizimusi rako, anowedzera maziso eziso iwe aunowana uye iyo yakasimba kwazvo yako brand ichave ichive ichave. Google Yemunharaunda Bhizinesi iri chaizvo pane yangu runyorwa!
Mar 23, 2011 pa 1: 50 PM
Kazhinji yenguva varidzi vebhizinesi vakanyura mukushambadzira makambani avo pamawebhusaiti enetiweki kana internet zvekuti kazhinji vanokanganwa sarudzo idzi. Izvi zvinonyanya kuitika kune vekare amai nemabhizinesi epop, avo vaigara vachivimba neshoko remuromo mukurumbira wemakambani avo.
May 13, 2011 pa 11: 35 AM
Isu tanga tichipedza nguva yakawanda tichigadzirisa mabhizimusi emuno emabhizimusi kuGoogle Local Bhizinesi pamwe neMepu uye tichishandisa Mamepu Booster Semuenzaniso imwe yemasaiti edu enhandare yekupaka makambani ekuchengetera anowana hafu yetraffic yavo chete kubva paMepu zvinyorwa chete. Kuve nebhizinesi rako remuno pane peji rekutanga kwakakosha uye isu tinoona mukana kune vatengi vedu sezvatinovawana ivo pane imwe peji imwe nguva yavo ye "mari mazwi akakosha". Ini ndinoda kuwana vatengi paMepu, PPC uye Natural. Kuita izvi ndinogona kuvhara 10-15% yeese peji iyo imwe real estate. Kana vatengi vangangoita tsvagiridzo uye voona zvinopfuura chimwechete pamusoro uye kana pasi pechikwata tinoona bhizinesi idzva, tisingatauri vatengi vatsva.